Amathiphu abazali abasha. Kungani kubalulekile ukuba ukwethula nendondo ngenxa enkulisa iziqu?
Ngandlela-thile, imiklomelo ezikhethekile kuphela abafundi abasanda kuphothula umatikuletsheni nezikhungo zemfundo ephakeme. Kepha ukuphela kwezinto enkulisa - hhayi ngaphansi ebalulekile senzakalo siyiqiniso, futhi ngezindinganiso ingane, mhlawumbe okubaluleke nakakhulu. Kwakuwusuku isipiliyoni sakhe sokuqala, futhi ngakho-ke kungaba ukuhlakanipha kakhulu ukuba amnike indondo ekhethekile ukuze bakhumbule lesi sikhathi.
Ikakhulukazi, kungani owafundisa indondo amahle for enkulisa iziqu? Ngiyavuma, angali isipho esinjalo kunoma izinyane, ikakhulukazi suku olwaba olubaluleke kakhulu enjalo. Kodwa kunzima kangakanani ukwakha isimiso esinjalo Trophies?
Zonke ezandleni abazali
Kumele siqale nge yokuthi ukuphathwa enkulisa ezimweni eziningi bajabule ukusekela yalolu. Lokho nje udinga ukuqonda into eyodwa - zonke izindleko kufanele amboze abazali. Futhi-ke isinyathelo sokuqala ukuxoxa lo mbono nabanye obaba nomama.
Mhlawumbe hhayi wonke umuntu kuzothatha kulesi siphakamiso ngomdlandla, ngoba Kweminye imindeni, emnothweni ongaphambili. Ngenxa yalokho, isidingo ukunikeza agumenti eqinile ngalokho, kungani sidinga ukwethula nendondo ngenxa enkulisa abathweswe iziqu.
Three agumenti onohlonze
Ngakho, nathi singakwethemba phikisana kungani ngokuvamile kunesidingo. Kodwa ukubeka konke endaweni yalo kuyosisiza yezizathu ezilandelayo:
Lokhu akusho kuhilelani eqolo, ikakhulukazi uma wazi lapho ungathola indondo for enkulisa abathweswe iziqu.
Lokhu uyonikeza ingane umthombo imizwelo eyakhayo, okuyinto kumelwe kube yinto ebalulekile abazali.
Ekugcineni, njengomuntu indondo ebodeni kuyosishukumisela izinyane ukuba eminye impumelelo ezifundweni.
Uma bonke abantu abavumayo lo mbono, uzodinga ukuxoxa ukubukeka izipho. Phela, eyodwa ngeke asondele evamile amakhadibhodi inkohliso, namanje abanye bafuna umhlobiso egcwele metal. Ngenxa yalokho, etafuleni round uzodinga ukuqhuba izingxoxo sina, lapho yonke imininingwane futhi ukuthola.
Ngokwesibonelo, ungenza nje izindondo for enkulisa abaphothule, ukuze ukhuthaze abantwana. Noma ukuze imihlobiso ngemibala ehlukene, ukuze laba bafana kancane blue, futhi amantombazane - Imibala.
Lapho ukuthola indondo for enkulisa iziqu?
Uma ikomidi wabazali unqume ukwenza umhlobiso linesizotha, isibonelo eyenziwe amakhadibhodi, kungenzeka ukuba uqaphele kakhulu lowo mbono, futhi bebodwa. Ukuze wenze lokhu, nje kufanele ukhethe elilodwa noma amabili nights khulula ukuze usike futhi lezo yonke imininingwane.
Ukuze womshini ngaphezulu izindondo eziyinkimbinkimbi ungakwazi ukusesha yabo ingcweti muzi izokhuluma umyalelo efanayo. Yini embi ngalo wukuthi lolu khetho kungadla ezibizayo okuningi kwalowo odlule. Nokho, lezi Trophies uyobheka ezinhle abangaphezu kuka-amakhadibhodi.
Kodwa kungcono kakhulu ukuthenga indondo esitolo okukhethekile. Nokho, lezi zinhlangano - into sasivumela ezingavamile, ikakhulukazi emadolobheni amancane. Futhi ungakhohlwa mayelana nalelo khulu leminyaka manje xxi, imikhiqizo eminingi kungenziwa yayala ngokusebenzisa i-inthanethi.
Amazinga aphezulu e-ke umntwana, emikhawulweni abandayo. ukunakekelwa okwengeziwe
Yini kuthinta impilo yengqondo lezingane zesikole?
Mechanical yokuvikela ukweba imoto: amafomu, imiyalelo, ukubuyekezwa
Kuthiwani uma umfana ayithande guys? Izincomo nezeluleko njengesazi sokusebenza kwengqondo
"Ingalipt": analogs futhi impendulo kuyo
Izilonda Cold olimini. Izimbangela weni nasekwelapheni tifo yayo
Program usebenza ngomsindo: alalelwayo umhleli ukubuyekeza
Uphethiloli brushcutter: kanjani ukukhetha?